AH Birta damacsan slurry saar - Shiinaha JP Birta & Qalabka
Hordhac Nooca AH, HH, M bambooyin waxaa cantilevered, siman, bambooyin slurry culus. Waxay waxaa loogu talagalay wax ka qabashada slurry sugi lahaayeen ama xoqe ee qodniinka-, macdanta, dhuxusha, xoogga, dhismaha qalab iyo waaxaha kale ee warshadaha iwm AH (R), HH waxaa sidoo kale loo yaqaannaa bambooyin slurry waajib culus, waxaa loo isticmaalaa in gaadiid cufnaanta sare sugi lahaayeen xoog leh ama cufnaanta hooseeyo slurry madaxa sare. Cadaadis la ogolyahay, bambooyin noocan ah ayaa sidoo kale lagu rakibi karo ee taxanahan multistage. nooca HH pu ...
Supply Capacity: 5000 Cadad per Year
Nooca AH, HH, M bambooyin waxaa cantilevered, siman, bambooyin slurry culus. Waxay waxaa loogu talagalay wax ka qabashada slurry sugi lahaayeen ama xoqe ee qodniinka-, macdanta, dhuxusha, xoogga, dhismaha qalab iyo waaxaha kale ee warshadaha iwm
AH (R), HH waxaa sidoo kale loo yaqaannaa bambooyin slurry waajib culus, waxaa loo isticmaalaa in gaadiid ah cufnaanta xoog hadal haynta badan ama cufnaanta yar yahay madaxa sare slurry. Cadaadis la ogolyahay, bambooyin noocan ah ayaa sidoo kale lagu rakibi karo ee taxanahan multistage. HH bamka nooca uu yahay inta badan loo isticmaalo gaadiidka cufnaanta yar yahay madaxa sare ama cufnaanta sare hoos u slurry sugi lahaayeen madaxa sare.
M (R) waa nooc ka mid ah bamka slurry waajib dhexe, waxaa loo isticmaalaa in gaadiid size walxaha ganaax iyo slurry cufnaanta dhexe.
The dalaka iyo impeller of AH (R) M (R) model ah oo noqon kara isbedel iyo wax noqon kartaa biraha anti-haynta ama caag, laakiin wax of dalaka iyo impeller of model HH oo keliya noqon kartaa version biraha. Rubber qaybaha wax qoyan waxaa inta badan loo isticmaalaa gaadiidka slurry ah taas oo ka kooban wanaagsan, size walxaha aan af badan.
shaabadihiisa usheeda dhexe nooca AH (R), M (R) iyo HH bambooyin noqon kartaa adoptable of seal qanjirka, seal expeller iyo shaabaddii farsamo. Dheecaanka la taagan karo dura 45 darajo by codsiga iyo oriented si kasta oo siddeed iyo jagooyinka, si loo waafajiyo la rakibo iyo codsiyada.
1. laanta Dheecaanka la taagan karo dura 45 degree.
2. replaceability Good qaybaha bamka asalka ah.
Biraha 3. Xidho u adkaysta iyo waqti nolosha adeeg dheer.
4. Iyadoo axial weyn iyo radial awoodda load rating,
5. jihada Dheecaanka lagu rakibi karo dura 45 degrees sida codsiga iyo oriented si kasta oo siddeed iyo jagooyinka, si loo waafajiyo codsiyada.
6. habboon xaaladda shaqo oo kala duwan.
7. codsiga Wide, oolnimada sare oo fudud si ay u ilaaliyaan.
8. fursadaha Wide for impeller.
9. sita sifaynta isticmaalka shirka dufan.
Chart Xulashada iyo Performance
Model bamka Ogolyahay Max. Power
H (m) n Speed ​​(r / min) Max.Eff.
3/2 C - AH 30 39.6-86.4 11:24 12-64 1300-2700 55 4-6 214
1. kala duwan Capacity talinayaa: 50% Q'≤Q≤110% Q '(Q' ku haboon in awoodda barta hufnaanta ugu sarraysa).
2. NPSH: ku haboon in la tilmaamo Q talinayaa xawaare sareeya
The AH bambooyin slurry nooca waxay leeyihiin guddiyo bamka in ka kooban yihiin safay biraha Duugga u adkaysta badeli ama xirtaan u adkaysta safay caag, iyo impellers sidoo kale dalban kartaa qalab bir Duugga u adkaysta ama xirtaan u adkaysta wax caag. The HH bambooyin slurry nooca codsan kaliya wax bir Duugga u adkaysta sida jidhkooda oo bamka iyo impellers.
AH bamka slurry taxane waxaa si balaadhan looga isticmaalaa in metallurgy, macdanta, processing macdanta, waarididda ah, dewatering, daaweynta biyaha, dhuxusha lagu dhaqo, dhagaxshiidka, duufaanta feed, tailing, xoogga, dhismaha wax ... iwm. goobaha kala duwan ee warshadaha. Bambooyin Our waxaa loo yaqaan magacyo kala duwan waajibaadka shaqo oo kala duwan: bamka Macdanta processing, Mill saar slurry dheecaan, bamka buusterka, bamka Quudinta, Tailing bamka, bamka Transfer Thickner Underflow saar, De-waraabiyo bamka screen, bamka Cadaadis, aruuri bamka ...